Amin’ny Fiarahana amin’ny toerana dia tena hoe tena mitovy amin’ny tambajotra sosialy, mankafy be dia be ny lazany
Ny tambajotra sosialy manokana namany sary, maimaim-poana, manome fahafahana ireo mpampiasa ny manampy ny vaovao momba ny tenanao, mampakatra ny sary, horonan-tsary sy ny hafa ny angon-drakitra. Ny fototry ny nanampy vaovao momba ny tenanao, mandray ny mpampiasa vaovao momba ny hafa voasoratra ao amin’ny tambajotra ity, ny olona izay hahazoany manana fifandraisana (ohatra, nianatra tao amin’ny sekoly iray, dia mijanona ao amin’ny iray ihany ny fotoana ao amin ‘ny fialan-tsasatra an-trano, ilaina ao amin’ ny faritra misy anao, tombontsoa iombonana, sns.).
Noho izany, misy tambajotra sosialy natao ho an’ny indray namana taloha, miaraka amin’ny vaovao ny olom-pantatra, mifampiresaka, sy mifampizara ny vaovao, ny antontan-taratasy, sns. Isaky ny mpandray anjara ao amin’ny tambajotra miteraka ny»mini-toerana»izay maneho ny maha-izy azy.
Alohan ‘ny hahatongavan’ ny tambajotra sosialy, maro ireo olona namorona ny Aterineto ho an’ny olona tranonkala ny tenany — toy izany koa hoe»ny an-trano pejy». Matetika izy ireo no tafiditra ny sary, ny fifandraisana vaovao, voafaritra amin’ny isan-karazany ny mahaliana ny tompony, ny fianakaviana, ny asa, sns. Mba hamorona toy izany ny vohikala ilaina ny mahafantatra io markup-teny ary ny mpampianatra rehetra ny fototry ny famoronana tranonkala, ary indraindray dia nandriatra ny fampiantranoana sy ho afaka hitantana ny leased mpizara.
Noho ny fahatongavan’ny tambajotra sosialy, ny zavatra rehetra dia lasa mora kokoa
Mba mamorona anao manokana pejy ao amin’ny tambajotra sosialy ny tsy mila vola.
Ho fanazavana mikasika izany, tsy misy fahalalana manokana koa dia tsy ilaina
← Lahatsary fifandraisana tsy misy jereo
Frantsa Chat →